Shahaadada CE waa shuruud weyn, waxay udub dhexaad u tahay amarka Yurub ee Midowga Yurub bishii Maajo 7, 1985, (85 / C136 / 01), hab cusub oo isuduwidda tikniyoolajiyadda iyo heerka xallinta loo baahan yahay ujeeddada dejinta iyo fulinta dardaaranku wuxuu leeyahay macno gaar ah, kaas oo ku xaddidan alaabooyinka aan khatar gelinaynin nabadgelyada xoolaha iyo waxsoosaarka marka loo eego shuruudaha aasaasiga ah ee nabadgelyada, halkii looga baahnaa tayada guud ee tayada, amarka isku-duwidda oo keliya shuruudaha waaweyn, tilmaamaha guud ee looga baahan yahay Hawsha caadiga ah Haddii badeecaddu buuxiso shuruudaha ugu muhiimsan ee dardaaranka la xiriira, calaamadda CE ayaa lagu dari karaa, halkii laga go'aansan lahaa in calaamadda CE loo isticmaali karo iyadoo loo eegayo shuruudaha guud ee tayada ee heerka la xiriira
Baahida loo qabo dalbashada shahaadada CE
Shahaadada CE, badeecadaha dhammaan waddamada ku yaal suuqa yurub si ay u ganacsadaan waxay bixisaa qeexitaan mideysan, fududeynta hababka ganacsiga ee alaab kasta oo waddan si ay u soo galaan aagga ganacsiga xorta ah ee yurubiyanka waa inay ahaato shahaadada CE, sheyga waxaa lagu calaamadeeyay calaamadeynta CE iyo alaabada shahaadada CE ee Midowga yurub iyo wadamada aagga ganacsiga xorta ah ee yurub ee suuqyada suuqyada CE ayaa sheegay in waxsoosaarka uu gaadhay dardaarankii EU wuxuu ubaahan yahay shuruudaha amniga; Waa nooc ka mid ah ka go'naanta shirkadaha ee macaamiisha, taas oo kordhinaysa kalsoonida macaamiisha ee alaabada. iibka suuqa Yurub.
Khatarta ah in la xidho oo la baaro kastamada; Khatarta ah in la baaro oo lala macaamilo hay'adaha kormeerka suuqa; Khatarta ah in lagu eedeeyo asxaab ujeedooyin tartan ah.
Faa'iidooyinka codsashada shahaadada CE
Tirada iyo kakanaanta sharciyada EU, qawaaniinta iyo iswaafajinta waxay ka dhigayaan waqti badbaadin, badbaadin shaqaale iyo fikrad yareynta halista si caawimaad looga helo wakaaladaha loo qoondeeyay EU. La xiriir shahaadada CE ee ay soo magacawday EU, taasoo sare u qaadi karta kalsoonida macaamiisha iyo maamulayaasha suuqa; Waxay si wax ku ool ah uga hortagi karaan soo ifbaxa eedeymahaas mas'uuliyad darrada ah; Xaaladda dacwada, shahaadada CE ee hay'adda loo qoondeeyay ee EU waxay noqon doontaa caddeyn farsamo oo leh saameyn sharci.
CE tilmaam tilmaam
Sanadihii la soo dhaafay, aagga dhaqaalaha Yurub (Midowga Yurub, xubin ka tirsan ururka ganacsiga xorta ah ee Yurub, marka laga reebo Switzerland) iibinta wax soo saarka suuqa, adeegsiga calaamada CE ayaa sii kordheysa, calaamadda CE ee lagu calaamadeeyay badeecada ayaa tiri waxay la jaanqaadeysaa nabadgelyada iyo caafimaadka, ilaalinta deegaanka iyo ilaalinta macaamiisha, iyo dardaaranno taxane ah oo reer Yurub ah oo lagu muujinayo shuruudaha bishii Diseembar 1997, amarka ec ee soo saaray calaamadda CE waa sida soo socota.
Tilmaamaha farsamada waxbarida danab hoose ee barashada iswaafajinta elektromagnetic qalabka dhismaha qalabka tilmaanta cadaadiska qalabka barashada qaylada edbinta raaxada yacht tilmaamaha wiishka tilmaamaha waxyaabaha qarxa ee cadeynta u ah qalabka caafimaadka ilaaliyaha tilmaamaha qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed edbinta qalabka isgaarsiinta qalabka gaaska tilmaanta qalabka cabbiraadda.
Baaxadda shahaadada CE
Calaamadda CE waxaa u baahan labada waddan ee EU iyo EEA. Laga bilaabo Janaayo 2013, Midowga Yurub wuxuu leeyahay 27 dowladood oo xubin ka ah, kuwaas oo kala ah
Saddex xubnood oo ka tirsan EFTA: Iceland, Liechtenstein, Norway
Dalka Semi-eu: Turkiga
Dukumiintiyada farsamada ee loo diyaarinayo shahaadada CE
1. magaca iyo cinwaanka soo saaraha (wakiilka idman ee EU (wakiilka idman ee eu) AR), magaca iyo qaabka badeecada, iwm; 2. Buugga hawlgalka alaabta; 3. Dukumiintiyada nashqadeynta amniga (oo ay ku jiraan sawirka qaabdhismeedka muhiimka ah, taasi waa, sawirka naqshada oo ka tarjumaya tirada iyo dhumucda lakabka dahaarka ee nadiifinta masaafada fuulitaanka); 4. Xaaladaha farsamo ee badeecada (ama heerarka shirkadaha) iyo sameynta xog farsamo; 5. Jaantuska jaantuska iyo jaantuska wareegga qalabka korontada; 6. Liiska waxyaabaha muhiimka ah ama alaabta ceeriin ah (fadlan dooro alaabooyinka leh calaamadda shahaadada Yurub); 7. Warbixinta Imtixaanka; 8 shahaado laxiriira oo ay soosaartay NB, awooda cadeynta awooda ee Midowga Yurub (qaababka kale ee aan aheyn qaabka A); 9 shahaadada diiwaangelinta badeecada ee EU (alaabooyinka qaar sida aaladaha caafimaadka ee heerka 1aad, qalabka caadiga ah ee baaritaanka baaritaanka cudurka IVD); 10. CE cadeynta u hogaansanaanta (DOC)
Nooca alaabta ee shahaadada CE
1. caddeynta Awoodda korantada: is-gaarsiinta awoodda is-gaarsiinta xeedho koronto soo-bandhige awoodda LED-ka awoodda LCD awoodda UPS, iwm.
2. Shahaadada CE ee laambada: shandada, laambada wadada, laambada barxada, laambada gacanta, laambada hoos, xariga laambada laydhka, laambad, laambada barta iftiinka, laambada nalka LED, laambad shidan, laambada aquarium, laambada LED, laambada laydhka, nalka keydinta tamarta , Laambad T8, iwm.
3. Shahaadada CE ee qalabka guriga: marawaxadda, Kululeyda korantada, rikoodhada, TV-ga, jiirka, faakiyuumka, iwm.
4. shahaado elektaroonig ah CE: router-ka dhegaha, batteriga taleefanka gacanta, tilmaamaha laser, gariiriye, iwm.
5. alaabada isgaarsiinta cadeynta CE: telefoonka mashiinka ka jawaaba taleefoonka ee mashiinka ugu weyn iyo kaarka isku xirka xogta mashiinka fakiska iyo alaabada kale ee isgaarsiinta
6 alaabooyinka wireless-ka ah ee shahaadada CE: bluetooth BT alaabada kumbuyuutarka kumbuyuutarka kumbuyuutarka wireless, ku hadalka, aqrinta iyo qorista jiirka wireless transceiver raadiyaha wireless makarafoonka wireless network wireless nidaamka gudbinta sawirka wireless iyo alaabada kale ee wireless wireless awood yar, iwm;
7. Shahaadada CE ee alaabada isgaarsiinta wireless: 2G taleefanka gacanta 3G taleefanka gacanta 3.5g taleefanka gacanta DECT taleefanka gacanta (1.8g, 1.9g band) wireless Walkie-talkie, iwm.
8. Shahaadada mashiinka CE: mashiinka baatroolka mashiinka alxanka korontada mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka wiishka wiishka wiishka mashiinka dharka lagu dhaqo bulldozer mashiinka mashiinka mashiinka timaha lagu daaweeyo qalabka batroolka alxanka mashiinada alwaaxa qashinka lagu wareejiyo qodaalka mashiinka mashiinka mashiinka goynta mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka goynta toosan mashiinada cuntada birta ah ee mashiinka cawska, iwm;
9. Shahaadada CE ee qalabka caafimaadka
Ogeysiis shahaadada CE
Waxaad ubaahantahay inaad sameyso shahaadada CE, fiiro gaar ah ulahaad raadsato hay'adaha shahaadada CE, ka dib markaad tijaabiso alaab tayo leh iyadoo loo marayo shahaadada CE waa runta shahaadada CE, shenzhen Anbotek ember imtixaan ka duwan saamiyada wakaalada CE / la talinta CE ee shirkada la talinta CE, waxay leedahay xirfadle madax banaan shaybaarka, qibrada hodanka ah ee shahaadada CE, waxay bixin kartaa hal-istaag dhameystiran iyo adeegyo tijaabo iyo shahaado bixin ah, Ingiriiska iyo Mareykanka 58 dal iyo gobal, oo ay kujirto Jarmalka, waxay gaareen heshiisyo aqoonsi oo is-dhaafsi ah, warbixinta baaritaanka waxay leedahay kalsooni caalami ah. Maaddaama ay tahay shirkad caddeyn CE ah hay'ad caddeyn CE awood leh, waa sheybaar saddexaad oo sheybaar u ah u jaangooynta sharciga Jarmalka TUV, waxayna noqon kartaa wakiilka shahaadada Jarmalka tuv-ce.
Shahaadada Midowga Yurub ee CE waxay doorbiday saamiyada baaritaanka Anbotek, ku soo dhawow inaad sameyso la tashiga wax soo saarka CE iyo shahaadada sheyga CE
Tijaabada Anbo co., LTD waxay bixisaa ku dhowaad dhammaan baaritaanka wax soo saarka CE iyo shahaadeynta, si loo buuxiyo shuruudaha soo saarayaasha si loogu dhajiyo calaamadda CE. Anbo waa hay'adda shahaadada CE ee shenzhen. Haddii aad xiiseyneyso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shahaadada CE, fadlan nagala soo xiriir 0755-26014755 / 26066440